पोखरामा फिर्के पुलबाट बाईक खस्यो, कार्तिक १९ फेरि मंसिर १९ ! – BIG FM 101.2 MHz
Home » स्थानीय » पोखरामा फिर्के पुलबाट बाईक खस्यो, कार्तिक १९ फेरि मंसिर १९ !
पोखरामा फिर्के पुलबाट बाईक खस्यो, कार्तिक १९ फेरि मंसिर १९ !
रञ्जन अधिकारी पोखरा, २० मंसिर / पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ५ फिर्केको पुलमा कार्तिक १९ गते मोटरसाइकल दुर्घटना भयो ।
ग ५ प ४८२० नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पुलमा दुर्घटना हुँदा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका २४ कास्कीकोटका ३२ बर्षिय कृष्ण प्रसाद सुबेदी गम्भिर घाईते भए । उनलाई उपचार गर्न काठमाण्डौ नै लैजानुपरेको थियो । उनको टाउकोमा गम्भिर चोट लाग्यो । खानेपानीको पाईप नै फुटेको थियो ।
ठ्याक्कै एक महिनापछि मंसिर १९ गते सोहि स्थानमा मोटरसाईकल दुर्घटना भएको छ । ग ६ प ३५१९ नम्बरको पल्सर मोटरसाईकल बेलुकी सिधै खोलामा खसेको छ । यसअघि जस्तै बाईक क्षत विक्षत छ । चालकलाई सहारा हस्पिटल लगिएको प्रहरीले बताएको छ । नामथर यो न्युज तयारपार्दा सम्म खुलिसकेको छैन ।
निकै फराकिलो चार लेनको सडक बनिसकेको छ । तर फिर्के पुल भने जस्ताको तस्तै छ, एकैपटक दोहोरो सवारी चल्न पनि साँघुरो छ । बाटो फराकिलो देखेर तीब्र गतिमा गुड्ने सवारीहरु पुल आउने बित्तिकै बीच लेन समात्नुपर्ने हुन्छ तर स्पीडका कारण नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् अनि खोलामा खस्छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण त्यहाँ सडक बत्ती नहुनु रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
पत्रकार कञ्चन थापाले कार्तिक १९ र मंसिर १९ मा सचित्र घटनाबारे जानकारी गराएकी छन् । उनले सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यसअघि पनि जिप खसेको जनाईन् । आफूलाई ट्याग गरिएको पोष्टमा पोखरा ५ वडाअध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले पहिलो कमेन्ट नै गरेर तत्काल समस्या समाधानमा जुट्ने लेखेका छन् ।
पोखरा जेसिजका पूर्व अध्यक्ष नारायण शर्माले सडक बत्तीमै जोड दिएका छन् । दीपक प्रसाद कोईरालाले ओभर स्पिडका कारण यस्तो घटना भएको टिप्पणी गरेका छन् । शिक्षिका गौरी तमु, पत्रकार शिव दाइ, आस्था न्यौपाने, रामचन्द्र लामिछाने लगायतले तुरुन्त ध्यानाकर्षण होस् भनी कमेन्ट गरेका छन् ।
पोखरा बाग्लुंग हाईवेमा साँघुरो पुल र राति अँधेरो हुने भएका कारण दुर्घटना हुने गरेको स्थानीयले बताए । उनीहरुले रात्री समयमा सडक बत्तीको माग गरेका छन् ।
एक महिना अघिको न्युज:
पोखराको फिर्के पुलमा बाईक दुर्घटना, एक गम्भीर, पानीको पाईप नै फुट्यो (फोटो फिचर)